နေ့: အောက်တိုဘာလ 27 2019
တစ်နာရီလျှင် 350 ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးကျည်ဆန်ရထားကိုခရီးသည်တင်ငွေများဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်သောဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင်ခရီးသည်၏စမ်းသပ်မှုကိုလှုပ်သည် [ပို ... ]
Izmir ရထားနာရီနှင့်မြေပုံ 2019 ။ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Izmir နှင့်Sökeအကြားအပြန်အလှန် 1 လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ İzmirSökeမှ 127 ကီလိုမီတာသည်ပျမ်းမျှခရီးသွားချိန်ဖြစ်သည် [ပို ... ]
Izmir Denizli ရထားဇယားများနှင့်မြေပုံ 2019: Izmir Basmane Denizli ဒေသရထား၊ Basmane မီးရထားဘူတာမှ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ၏“ ရူးသွပ်သောစီမံကိန်း” Channel Istanbul ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ (EIA) ကိုနိုဝင်ဘာလတွင်အပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ 28 ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းကော်မရှင်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ TL ဘီလီယံ၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူ 75 [ပို ... ]
39 City ဆက်သွယ်ထားသောတရုတ်မီးရထားကွန်ယက်သည် 5,8 ကီလိုမီတာတစ်ထောင်ကျော်သွားသည်
39, China ကိုဆက်သွယ်သည့်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းသည်ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ကျော်သွားသည်။ တရုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန Sözcüsu Wu Chungeng သည် 39 မြို့အကြားရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ [ပို ... ]
၀ န်ကြီး Turhan: Burdur တွင်ခရီးသည် ဦး ရေတိုးလာလျှင်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Mehmet Cahit Turhan သည် Burdur အုပ်ချုပ်ရေးသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ Isparta အစီအစဉ်အပြီးတွင် ၀ န်ကြီး Turhan သည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Hasan Şıldakနှင့် protocol ကိုလာရောက်သည့်ဝန်ကြီး Turhan နှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။ [ပို ... ]
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းလူအများဆွေးနွေးခြင်းနှင့်စီမံကိန်းအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သော Erzincan-Gumushane-Trabzon မီးရထားလမ်းလမ်းကြောင်းတွင် Bayburt မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မသက်မသာဖြစ်သော Trabzon Bayburtlular အသင်းကစာနယ်ဇင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် Trabzon ၌တည်၏ [ပို ... ]
Izmir Tire Train Times and Map 2019: TCDD Taşımacılık A.Ş.4လေယာဉ်များကို mir ဇmirတုရုမြို့အကြားပြုလုပ်သည်။ mirzmir Ödemişအကြားလမ်းပြန်လည်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများပြီးနောက်တိုးချဲ့ခဲ့သည် [ပို ... ]
Elazığမြူနီစီပယ်မြို့တော်၏မြို့ပြခရီးသွားတန်ဖိုးများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် ၀ င်ရောက်စီးနင်းသောဘတ်စ်ကားဖြင့်သမိုင်း၊ သဘာ ၀ နှင့်ယဉ်ကျေးမှုခရီးစတင်ခဲ့သည်။ Elazig မြူနီစီပယ်သို့သွားရန်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားသောဘတ်စ်ကား [ပို ... ]
Balikkesir ရှိကျောင်းသားများအတွက် Balkart အထူးလျှော့စျေး
Balıkesir Metropolitan မြူနီစီပယ်, တညီတညွတ်တည်းမြို့ဘတ်စ်ကားလိုင်းပေါ်ရှိကျောင်းသားများအတွက် 17 အထူးလျှော့စျေးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ 2,00 TL ကျောင်းသားအချိန်ဇယား 1,65 TL, KYK - ကျောင်းဝင်းကျောင်းသားအချိန်ဇယား [ပို ... ]
Mersin Metropolitan မြူနီစီပယ်ကျောင်းသားများလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆေးမှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးရဲဌာနမှအဖွဲ့များသည် ၀ န်ဆောင်မှုလုံခြုံရေးစစ်ဆေးခြင်းများကိုမြို့အနှံ့ရှိကျောင်းများတွင်တိကျမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဤစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းများသည်မြင့်မားသောစံနှုန်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ [ပို ... ]
Mersin အတွက်6။ Caretta စက်ဘီးပွဲတော်စတင်
Mersin Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Vahap Seçer, Mersin စက်ဘီးခရီးသွားများအသင်းနှင့် Metropolitan မြူနီစီပယ်ယခုနှစ်6နှင့်အတူပူးပေါင်း။ Caretta စက်ဘီးပွဲတော်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ Secor သည်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများရှိတူရကီရဲ့ပါဝင်မှု 22 [ပို ... ]
29 ရှိ Izmir မှအောက်တိုဘာလတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 1 Kuruş .. ! သမ္မတနေ့အစီအစဉ်များကို Izmir တွင်ကြေငြာသည်
Izmir Metropolitan Municipality သည် 29 အောက်တိုဘာသမ္မတနေ့အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေကို“ 1 kuruş ,, သတ်မှတ်ထားသော 350 မီတာတူရကီအလံသည်မီးခုံချီတက်ပွဲ၏ချီတက်ပွဲနှင့်အတူသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Leman ဆမ် [ပို ... ]